Zvekurima Kudiridza & Silos Vagadziri & Vatengesi - China Kurairidzira Kudiridza & Silos Fekitori
Tinogona kusangana nezvinodiwa zvegiredhi rekudya kuti tive nechokwadi chekuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kumatura. Kushanda: kuchengetedza chibage, mupunga, gorosi, mhunga, soya uye zviyo.
Tangi rine dhizaini yetangi, inoshanda zvakanyanya uye yekuchengetedza nzvimbo, inowanzo shandiswa mukudiridza tsvina tsvina, nezvimwe.
Yakanyatsogadziriswa. Iyo fekitori inogona kugadzira zvikamu zvakajairwa zvinoenderana nezvipfuyo zvekushandisa, zvione standardization, generalization, serialization, kugadzirwa kwefekitori uye kumisikidzwa kwemunda.